हाम्रो बहुमत नभएकाले घोषणा–पत्र अनुसार नै काम गर्न सक्ने अवस्था छैनः खड्गराज उपाध्याय « Rara Pati
हाम्रो बहुमत नभएकाले घोषणा–पत्र अनुसार नै काम गर्न सक्ने अवस्था छैनः खड्गराज उपाध्याय
कर्णाली प्रदेशको दुर्गम जिल्ला दैलेखको आठविस नगरपालिकाको विकास, निर्माण , शिक्षा, स्वास्थ्य, कोरोना महामारीको प्रभाव र नियन्त्रणका सम्बन्धमा नगर प्रमुख खड्गराज उपाध्यायसँग रारापाटी डटकमले गरेको अन्तरवार्ताः
कोरोना कहरका बीचमा तपाईँको नगरपालिकामा विकास निर्माणका कामहरू कसरी अगि बढिरहेका छन् ?
आठविस नगरपालिकामा विकास निर्माणका कुरा गर्दा हामीले आठौं नगर सभाबाट पारित गरेर अगाडि बढेका योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौं । अहिले विशेष गरी कोरोना महामारीका कारण पनि हामीलाई काम गर्ने क्रममा बाधा अड्चनहरू व्यहोर्नु परिरहेकै छ । तैपनि हामीले लगभग ८० प्रतिशत जति काम पुरा गर्न सक्छौं भन्ने आँकलन गरेका छौं । कोरोना महामारीका बीचमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँदै हामीले विकास निर्माणका काममा अगाडि बढाइरहेकै छौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र नगरपालिकाका अन्य विकास निर्माणका काममा २५ देखि ३० जनालाई स्वास्थ्य सावधानीका साथ काममा लगाउने गरेका छौं ।
तपाईँको नगरपालिकामा कोरोना महामारीको प्रभाव कस्तो रहेको छ ? यसको नियन्त्रणका लागि के–कस्ता कामहरू गरिरहनु भएको छ ?
गत वर्ष कर्णाली प्रदेशकै पहिलो कोरोना संक्रमित १ जना मात्र आठविस नगरपालिकामा भेटिँदा राष्ट्रिय स्तरमै व्यापक चर्चाको विषय भएको थियो । यस वर्ष पिसिआर गर्दा ४६ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आयो । २ जनाको कोरोना संक्रमण भएर मृत्यू भएको छ भने १ जनाको मृत्यूपछि जाँच गर्दा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो ।
अगिल्लो वर्ष कोरोना संक्रमितको संख्या कम भएपनि हामीलाई भारत र बाहिरबाट आउने हाम्रा नगरवासीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्नका लागि निकै ठुलो चुनौति थियो । प्रत्येक विद्यालयलाई क्वारेण्टाइन बनाउँदा समेत व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परेको अवस्था थियो । हामीले २ हजार ७ सय ७५ जना मानिसहरूलाई क्वारेन्टाइनमा खानपान र बसोवासको व्यवस्था गरेका थियौं । गत वर्ष कर्णाली प्रदेशकै पहिलो कोरोना संक्रमित १ जना मात्र आठविस नगरपालिकामा भेटिँदा राष्ट्रिय स्तरमै व्यापक चर्चाको विषय भएको थियो ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि हामीले राज्यको स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड अनुसार एउटा वडाबाट अर्को वडामा मानिसहरूलाई नजानका लागि सूचना जारी गरेका छौं । पहाडको ठाउँ गाडी नचल्ने भएकाले एकाध मानिसहरू हिडि पनि रहन्छन् । अहिले हामीले ११ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई नियुक्त गरेर प्रत्येक घर–टोलमा गएर कसलाई ज्वरो आएको छ, कसलाई खोकी लागेको छ र कसलाई के–कस्ता खाले समस्या छन् भनी यसको पहिचान गर्न खटाइरहेका छौं । हामीले ३ सय जनाको एण्टिजेन र १ सय ५३ जनाको पिसिआर जाँच गर्यौं । पिसिआर गर्दा ४६ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आयो । २ जनाको कोरोना संक्रमण भएर मृत्यू भएको छ भने १ जनाको मृत्यूपछि जाँच गर्दा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो ।
एण्टिजेन जाँच गर्दा पोजेटिभ देखाएका मानिसहरूमा पिसिआर गर्दा नेगेटिभ देखाएका केसहरू पनि छन् । हाम्रो नगरपालिकामा आइशोलेशन निर्माण गरेका छौं । १० वटा अक्सिजन सिलिण्डरहरू ल्याएर हामीले राखेका छौं । हामीले ५ जना कारोना संक्रमितलाई यहि अक्सिजन लगाएर पनि उपचार गराइरहेका छौं । आइशोलेशनमा बस्ने सम्पूर्ण संक्रमितहरूको खानपानको व्यवस्था पनि नगरपालिकाले नै गरिरहेको छ ।
तपाईंले निर्वाचनताका जनतासँग गरेका बाचा प्रतिबद्धतालाई अहिलेसम्म के कति पुरा गर्न सक्नु भयो ? तीमध्ये महत्वपूर्ण कामहरू बताई दिनुहोस् न ?
निर्वाचनमा नगर प्रमुख सहित ४ वटा वडामा नेकपा (एमाले), उप–प्रमुखसहित ४ वटा वडा नेपाली काँग्रेस र १ वडा नेपाल मजदुर किसान पार्टी विजयी भएको अवस्था हो । यसरी यस नगरपालिकामा नेकपा (एमाले)को अल्पमतको सरकार रहेको छ । यसो भएकाले हामीले नेकपा (एमाले)को घोषणा–पत्र अनुसार नै काम गर्न सक्ने परिस्थिती छैन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)का तर्फबाट चुनावी घोषणा–पत्र नै लिएर जनताका माझमा गएका थियौं । निर्वाचनमा नगर प्रमुख सहित ४ वटा वडामा नेकपा (एमाले), उप–प्रमुखसहित ४ वटा वडा नेपाली काँग्रेस र १ वडा नेपाल मजदुर किसान पार्टी विजयी भएको अवस्था हो । यसरी यस नगरपालिकामा नेकपा (एमाले)को अल्पमतको सरकार रहेको छ । यसो भएकाले हामीले नेकपा (एमाले)को घोषणा–पत्र अनुसार नै काम गर्न सक्ने परिस्थिती छैन् । नगरपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने अरू दलका कुराहरूलाई पनि समेटेर अगाडि बढ्नु पर्ने वाध्यता रहेको छ ।
हामीले नगरपालिकाका सबै वडाका सदरमुकाममा सडक सञ्जाललाई जोड्ने लक्ष्य राखेका थियौं, जुन लक्ष्य पुरा गरिसकेका छौं । खानेपानीतर्फ ‘एक घर एक धारा’ निर्माण गर्ने योजना थियो यसमा हामी पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेका छैनौं, काम अगाडि बढिरहेको छ । हामीले विकास निर्माणसँग स्व–रोजगारीको कुरालाई पनि मध्यनगर गरी कृषिको कार्यक्रममार्फत् गत आर्थिक वर्षमा झण्डै १ करोड छट्याएका थियौं । यसबाट धेरै मात्रामा स्वरोजगारको सिर्जना हुने वातावरण बनेको छ । अर्को नगर प्रमुख रोजगार कार्यक्रममा मैले विदेशबाट आएका नगरवासीहरूलाई आफ्नो नगरपालिकामा उद्यमशिल काम गर्नका लागि समूहमार्फत् आर्थिक सहयोग जुटाउने प्रवन्ध गरेको छु ।
हामीले राकम कर्णालीमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली प्रदेश र आठविस नगरपालिकाको साझेदारीमा १ सय वेडको ट्रमा सेन्टर अस्पताल निर्माण गर्नलाई जग्गा पास गरी डिपिआर गरी अगाडि बढ्ने क्रममा छौं । अर्को हामीले स्वास्थ्यका भवनहरू नभएका ठाउँमा स्वास्थ्यसम्बन्धी भवनहरू निर्माण गरी सेवाग्राहीहरूलाई सेवा सुविधा दिने गरेका छौं ।
हाम्रो नगरपालिकामा राज्यको नीति अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य जनतासँग पहुँचमा पुग्नु पर्दछ भन्ने दृष्टिकोणले ११ वटा शहरी स्वास्थ्य कार्यालय निर्माण गरी कर्मचारी समेत व्यवस्थापन गरेका छौं । शिक्षातर्फ हामीले भौगोलिक र जनसंख्याका आधारमा २१ वटा वाल विकास केन्द्र निर्माण गर्ने काम पनि पुरा गरेका छौं । त्यस्तै ११ वटा माध्यमिक विद्यालयहरूलाई नमुना विद्यालय बनाउने दिशातर्फ अगाडि बढिरहेका छौं ।
तपाईँको नगरपालिकाका मुख्य समस्या र चुनौतीहरू के–के हुन् ?
पहिलो त मख्यतया भौगोलिक विकटता नै मुख्य समस्याका रूपमा रहेको छ । भौगोलिक विकटताका कारण सडक, खानेपानी, विद्युत तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न नै गाह्रो अवस्था छ । त्यस्तै हामीले चाहेर पनि सामाजिक संस्कृति, संस्कार, रितिरिवाजका कारण पनि एकिकृत बस्तीको विकास गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा छौं ।
तपाईंले नगरपालिकामा विकासको प्राथमिकता कसरी निर्धारण गर्नु भएको छ ?
विकासको प्राथमिकतामा सबैभन्दा बढि महत्व कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षालाई दिएका छौं । यसले गर्दा नगरवासीको जीवनस्तरमा अलिकति परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भन्ने यी ३ वटै कुरालाई सँगसँगै जोडेर अगाडि बढेका छौं । यससँग सडक पूर्वाधार, विद्युतिकरण र खानेपानीलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं ।
स्थानीय तहको कार्यकाल सकिन १ वर्ष मात्र बाँकी छैन्, यस बीचमा काम गर्ने कार्ययोजना कसरी बनाउनु भएको छ ?
विशेषतः हामीले करिव ६ महिना मात्र काम गर्न पाउँछौं । निर्वाचनमा जाँदा संविधानतः ६ महिना अगावै हाम्रो पदावधी सकिने व्यवस्था छ । यदि कोभिड–१९ का कारणले होस् वा अन्य कुनै कारणले स्थानीय निर्वाचन नहुने स्थिति भएमा हामीले बैशाखसम्म काम गर्न पाउने अवस्था हुन्छ ।
अहिलेको नगरसभाबाट हामीले आवश्यकताका आधारमा जनताको चाहना र मागलाई विशेष महत्व दिई सम्वोधन गर्ने योजना बनाएका छौं । जस्तै एक घर एउटा धारा कार्यक्रम छ त्यस अन्तर्गत धारा निर्माण गरी पानी खुवाउने व्यवस्था गर्न सकेनौ भने पाइपबाट मात्रै भएपनि घरघरमा पानी पुर्याउनेछौं ।
हामीले हाम्रै कार्यकालमा नगरपालिकामा विद्युत प्रशारण लाइन जोडी विजुली बत्तिको व्यवस्थापन गर्न हरसम्भव प्रयास गर्छौं । पोलहरू गाड्ने काम धमाधम चलिरहेको छ । अहिले प्रदेश सरकारले पनि झण्डै ४० करोड यस क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
स्थानीय तह प्रत्यक्ष रूपमा जनताका दैनन्दिन समस्याहरू साक्षात्कार हुँदै काम गरिरहेको एउटा सकारात्मक पाटो छ, सँगसँगै कतिपयले स्थानीय तहकै कारण समाज नै भ्रष्टिकरणतिर गयो भन्छन्, यसमा यहाँको के टिप्पणी छ ?
व्यक्तिगत रूपमा मेरो विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ भने पत्रकार र सरोकारवाला साथीहरू गएर समुदायमा बुझ्दा हुन्छ, मैले कुनै उपभोक्ता समितिबाट १ कप चिया खाएको रेकर्ड छैन् । म दावाका साथ म भन्न सक्छु कि हाम्रो नगरपालिकामा कसैले २ रूपैयाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण दिन्छ भने म त्यस्तालाई कारवाही गराउँछु र कारवाही गराउन नसके म आफू पनि नैतिकताका आधारमा पदमा रहन्न ।
कतिपय ठाउँमा यो कुरा हुनसक्छ । कहिपनि छैन भनेर भन्न मिल्दैन् । कसले कसरी काम गरिरहेका छ भन्ने कुरा त्यस ठाउँका जनताले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो । मैले यो कुरा कहाँ जोड्दैछु भने हामी अव १० महिनापछि निर्वाचनमा जान्छौं । म नै उम्मेदवार हुँला नहुँला । म उम्मेदवार नभए तापनि पार्टीको तर्फबाट भएको उम्मेदवारका लागि भोट माग्न जानु पर्ने हुन्छ । त्यहाँको नागरिकले भोट दिने कुरामा कसरी दिन्छन् त भन्दा यदि हामीले राम्रो काम गरेका छौं, कहिँ घुसखोरी गरेको छैनौं वा भ्रष्टाचार गरेको छैनौं भने पार्टीलाई जनताका बीचमा जान सहज हुन्छ । व्यक्तिगत रूपमा मेरो विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ भने पत्रकार र सरोकारवाला साथीहरू गएर समुदायमा बुझ्दा हुन्छ, मैले कुनै उपभोक्ता समितिबाट १ कप चिया खाएको रेकर्ड छैन् । म दावाका साथ म भन्न सक्छु कि हाम्रो नगरपालिकामा कसैले २ रूपैयाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण दिन्छ भने म त्यस्तालाई कारवाही गराउँछु र कारवाही गराउन नसके म आफू पनि नैतिकताका आधारमा पदमा रहन्न ।
तपाईँको नगरपालिकामा बहुमत नभएको अवस्थामा काम गर्नका लागि कत्तिको सहज अवस्था छ ? सत्तापक्ष र विपक्षी पार्टीका बीचको सम्बन्ध कस्तो रहको छ ?
म आफू नगरको प्रमुख भएको नाताले केहि लचिलो ढङ्गले जानु पर्दछ र सबैलाई मिलाएर लिनु पर्दछ भन्ने सोचाईं राख्छु । मैले लचकता अपनाउँदा अपनाउँदै पनि म नभएको बेला उप–प्रमुख, वडा अध्यक्षलगायत विपक्षी पार्टीका साथीहरूबाट नगरपालिकाको माइन्युट नै च्यात्ने काम भयो । त्यस अवस्थामा म आफै जिल्ला अदालतमा मुद्दा गर्न समेत जानु पर्यो ।
हामीले पहिलो नगरसभा सञ्चालन गर्ने क्रममा नेपाली काँग्रेसका जनप्रतिनिधि साथीहरूबाट अवरोध भयो । म आफू नगरको प्रमुख भएको नाताले केहि लचिलो ढङ्गले जानु पर्दछ र सबैलाई मिलाएर लिनु पर्दछ भन्ने सोचाईं राख्छु । मैले लचकता अपनाउँदा अपनाउँदै पनि म नभएको बेला उप–प्रमुख, वडा अध्यक्षलगायत विपक्षी पार्टीका साथीहरूबाट नगरपालिकाको माइन्युट नै च्यात्ने काम भयो । त्यस अवस्थामा म आफै जिल्ला अदालतमा मुद्दा गर्न समेत जानु पर्यो । नेकपा (एमाले) र नेपाली काँग्रेसका जिल्ला स्तरिय नेताहरूले मुद्दा नदिन अनुरोध गरेका कारण मुद्दा दिएन । त्यसपछि काँग्रेसबाट निर्वाचित उप–प्रमुख नै आफै गएर उच्च अदालतमा मुद्दा दिनु भयो । त्यस मुद्दामा पनि उहाँहरूले हार स्विकार्नु पर्यो ।
अस्ती पनि भर्खरै म आफू कोरोना संक्रमित भएर आइशोलेशनमा बसिरहेको बेला उप–प्रमुखको अध्यक्षतामा बैठक बसेर कार्यालयलाई औषधी खरिद गर्ने जिम्मेवारी दिने निर्णय गरियो । औषधी आइसकेपछि यस औषधीको विल आएन भनी कुरा नै नबुझि सामाजिक सञ्जालमा विरोध गरिरहेका छन् । नचाहिने कुरामा अनावश्यक विरोध गरिरहेका हुन्छन्, गल्ती भएको भए विरोध गर्नु स्वभाविक हो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका साथीहरूमा पनि द्वेद चरित्र देखिन्छ । उहाँहरूले पनि आफ्नो अनुकुलता जता मिल्छ सोहि बमोजिम गर्ने गरिरहनु भएको छ । राजनीतिक दलको कुरा गर्ने हो भने नेपाली काँग्रेस पार्टीले पनि मलाई असहयोग गरेको छैन् । स्थानीय निर्वाचनमा मेरा प्रतिस्प्रर्धी प्रेमप्रकाश शाहीले गत वर्षको नगर सभामा विकास निर्माणका कामहरू के कति भएका छन् त्यो जनताले थाह पाउँछन् तर उहाँको मेयरले आर्थिक अपचलन गर्नु भएको छैन् भनेर बोल्नु भयो ।
राष्ट्रिय राजनीतिको बाछिटाले नगरपालिकाको विकास निर्माणको कामलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
हाम्रो नगरपालिकामा विकास निर्माणका काममा त्यस्तो खास प्रभाव परेको छैन् । स्वभाविक रूपमा पार्टीभित्रको चरम विवादका कारण तलतलसम्म दुवै पक्षले आ–आफ्ना ढङ्गले गतिविधि गरिरहेको अवस्था छ । अर्को टिमबाट पनि मलाई नगरपालिकामा काम गर्ने कुरामा असहयोग चाहिँ भएको छैन् । हामी नेकपा (एमाले) एकढिक्का भयौं भने अँझैपनि आठविस नगरपालिकामा अरू कसैले केहि गर्न सक्दैन् ।